Kiiska Ikraan Tahliil oo dib u soo laba-kacleeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Kiiska Ikraan Tahliil oo dib u soo laba-kacleeyay
Qoyska Sarkaal Ikraan Tahliil oo maqane ah tan iyo 26-kii Juun, ayaa Qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay wali u taagan yihiin raadinta cadaaladda kiiska gabadhooda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qoyska Ikraan Tahliil Faarax ayaa ka hor yimid hadalkii uu jeediyay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, General Cabdullaahi Buule-kamey, kaas oo sheegay in baaris hordhac ah, lagu ogaaday in Ikraan, aysan ku maqneyn gacanta Kooxda Fahad Yasiin.
Cabdullaahi Buule-kamey, wuxuu 22/11/2021, sheegay in guddiga barista kiiska, ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, aysan u soo bixin wax caddeyn ah oo muujinaya in Ikraan ku maqan tahay gacanta Saraakiisha NISA.
Tallaabadaas waxaa hore loogu macneeyay in la soo af-meeray kiiska maqanad Ikraan, waxaana hadalka Buule-kamey, u jeedkiisu yahay in lagu madax-banneeyo eedeysanayaasha oo doonaya in ay helaan kuraas Baarlamaan.
Hadaba Qoyska ayaa si adag kaga hor yimid baaristaan, waxayna Cabdullaahi Buule-kamey ku eedeeyeen inuu isku dayayo xiridda kiiska, isla-markaana uu doonayo inuu bariyeelo eedeysanayaasha ay gacantooda ku maqan tahay Ikraan.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayay dhankiisa ku eedeeyeen inuu ka baxay ballantii uu u qaaday caddaalad u raadinta kiiska, isla-markaana tuhmanayaashii gacanta u galiyay baarista.
(Qoraallo hore oo la xariira kiiska)
“Kiiska Ikraan” Fahad Yaasiin oo la bari-yeelay [Fashilka Rooble]
Maxay hooyada Ikraan ka tiri hadalka Buulle-kamey?
Hoos ka aqriso qoraalka ka soo baxay qeyska Ikraan.
Qoyska Dhibbane Ikraan Tahliil Faarax
Ujeeddo: Jawaab Celinta Go'aan Baariseedka Xeer-ilaaliye Buule-Kamey uu ka akhriyay TV-ga Afka Dowladda, markii ay taariikhdu ahayd 22/11/2021.
Tr: 24 December. 2021
Qoyska muwaadin Ikraan Tahliil Faarax, waxaan halkaan uga jawaabaynaa war xaqiiqada ka fog oo kasoo baxay Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida (CCS) 21-kii Nofember 2021, cinwaanna looga dhigay “baaris hordhac ah oo ku saabsanaa kiiska Ikraan Tahliil Faarax”.
1. Warbixin Baariseedka uu Xeer-ilaaliyaha ka sheegay warbaahinta waxay khilaafsan tahay Habraaca loo maro baarista fal danbiyeed-yada.
2. Muwaadin Ikraan Tahiil waxaa gurigeeda oo ku yaalla xarunra Hay’adda NISA dhexdeeda ka qaaday Baabuur uu leeyahay eedeysane Kulane Jiis habeenkii ay taariikhdu ahayd 26-ka June 2021, markaas ayaana cid ugu war danbeysay.
3. Waxaa xusid mudan in bartamihii bishii July, hooyo Qaali Maxamuud Guhaad iyo xubno qoyska ka mid ah ay kulan la yeesheen Fahad Yaasiin oo xilligaas ahaa Agaasimaha hay'adda NISA waxa uuna qabsaday mudo laba maalin gudaheeda ah in uu gabadha ku keeni doono taas oo caddeyn u ah in Ikraan ay ku maqan tahay gacanta Hayadda NISA.
4. Maalintii 24/07/2021 hooyo Qaali Maxamuud Guhaad ay dacwad u gudbisay Maxkamadad Ciidamada Qlabka Sida (COS). Maalinkii 7/09/2021 ayaa Maxkamaddu qabatay gal dacwadeed ay gudbiyeen qoyska reer Tahliil Faarax, kaasoo ay eedeysanayaal ka yihiin dadka kala ah:
1. Fahad Yaasiin Daahir
2. Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey)
3. Cabdullaahi Kulane (Kulane Jiis)
4. Cabdiqani Dhiirane (Wadne Qabad)
5. Taariikhdu markay ahayd 2/09/2021, waxaa warbaahinta ku hadasha afka Dowladda lagu baahiyay qoraal ka soo baxay NISA oo ciwaan looga dhigay “Tacsi” kaasoo NISA ku sheegatay in Ikraan Tahliil ay dileen ururka al-Shabaab. Hase yeeshee wax ka yar 24 saac ayey al-Shabaab ku beeniyeen ku lug lahaanshaha kiiskan.
6. Xeer Ilaalintu waxay si cad ugu sheegeen qoyska iyo qareenkooda-ba inaysan u suurtoobin baarista kiiska sababo la xiriira in saraakiisha NISA ee eedeysanayaasha ah ay is hortaag ku sameeyeen baaritaanka kiiska, iyaga oo caddeeyay in xaaladda taagani aysan saamaxeyn in baarista la sii wado.
7. Waxaa nasiib darro ah in Ra'isul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo horey u ballan-qaaday in kiiskan si dhab ah loo baari doono, qoyskana ay heli doonaan caddaalad, inuu tuhmanayaashii NISA ee loo heystay kiiskan uu gacanta u geliyay isla kiiskii ay eedeysanayaasha ka ahaayeen sida ku cad bayaanka Ra'isul Wasaaraha uu bixiyay 26 October 2021 mar uu booqday taliska NISA. Taasoo ay daba socotay warqad 03/11/2021 uu qoray eedeysane Yaasiin Farey oo uu u diray Xeer ilaaliye Buule-Kamey kuna sheegtay inuu wareejiyay gal baariseed uu isaga isku soo baaray.
1. Haddaba qoyska Ikraan Tahiil ma aqbalin warbixinta uu shaaciyay Xeer-ilaaliya Buule Kamey. Mana ahan mid sharciga waafaqasan.
2. Xeer ilaaliye denbi cid kama baabi'in karo, mana laha awood u uku xiro kiis ka furan maxkamadaha sharciga.
3. Maxkamadda CQS waxay noo caddeysay in dacwadda Ikraan Tahiil aan weli la qaadin, isla markaana kiiska uu weli ka furan yahay Maxkamadda CQS.
Waxaan xog ku heynaa in Xeer-ilaaliye Buule Kamey uu hadlay kaddib markii baabuurka eedeysane Yaasiin Farey lagu geeyay xarunta NISA, kaddibna muuqaalka looga dhex duubay xarunta NISA isla maalinkaas 21 Nofembar. Muuqaalkaasi oo laga siidaayey warbaahinta dowladda afkeeda u hadasha. Sida la wada og yahayna, wuxuu ujeedku ahaa in loo gogol-xaaro kursiga xildhibaannimo ee uu eedeysane Yaasiin Farey uu maalin kaddibna ugu safray Dhuusamareeb.
5. Tiirarka dowladnimada waxaa ugu muhimsan caddaladda. Haddii caddaalad ay waayaan dadweynaha, waxay ku qasbanaan doonaan inay gacmahooda ku raadsadaan caddaalad ay ku qanacsan yihiin.
6. XAQ DADKII LAHAA DABA JOOGAAN MARNABA MA LUMO. Qoyska Ikraan Tahiil waxaa ka go’an caddaalad u helidda kiiskan waxkasta, iyo waqti kasta oo ay qaadato.